Dr. Tint Swe's Writings: Nausea and Vomiting ပျို့ချင်အန်ချင်
ကန်တော့ပါ။ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကို ကျော်ဖတ်နိုင်။ ဆောရီး။
၁။ ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် ၂၃ နှစ်ပါ အိမ်ထောင်မရှိပါဘူးရှင် မနက်တိုင်းလိုလို အဝါရောင် အရည်တွေအန်နေပါတယ်ရှင် ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာ သိလို့ရမလားရှင် တခါတလေ အချွဲတွေပါ ပါတယ်ရှင် (တစ် ၂ လုံးကို ပြင်လိုက်တယ်။ ရာသီ မသိ။)
၂။ မ Female 4days စားပီး စားသမျှ ပြန်အန် အပျိုပါဆရာ
အသက် ၄ ရက်သမီး။ အပျို။ နားမလည်ပါ။ ဆောရီး။
ဖြစ်တာ 4ရက်ပါ အသက်က ၂၅
ရာသီ မပြော။ တခြား သံသယရှိစရာ မသိ။ ဘလော့မှာ ဖတ်နိုင်။
စားသမျှ ပြန်ပီး အန်ပါတယ် ရာသီလာပါတယ်ဆရာ ဆရာဝန်တွေက အစာအိမ်ဆေး ပေးတယ်ဆရာ
ပျို့ချင်-အန်ချင်တာဟာ ရောဂါတခုခုရဲ့ လက္ခဏာသာဖြစ်တယ်။ ရောဂါမဟုတ်ပါ။ အန်ချင်တာကို အကြောင်းတရား အများကြီးကနေဖြစ်စေတယ်။ အစာအိမ်ရောင်တာ၊ အစာဆိပ်သင့်တာလို သိပ်မဆိုးတာနဲ့ ဦးနှောက်ကင်ဆာလို ဆိုးတာကနေလဲ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ မအန်ခင် ပျို့လာပေမဲ့ ပျို့တိုင်းတော့ မအန်ဘူး။ အန်တာများရင် ဝမ်းလျှောသူတွေလိုဘဲ ဓါတ်ဆားရည်တိုက်ရ သွင်းနိုင်တယ်။ အအန်ပျောက်ဆေး တခါတလေ လိုမယ်။
အန်တာနဲ့ အစာအိမ်ထဲကဟာတွေ အထက်ဆန်တာနဲ့မတူပါ။ အန်တာက အင်နဲ့အားနဲ့ အစာအိမ်ထဲက ရှိသမျှကို ထုတ်ပြစ်တာ။ နောက်တမျိုးက အားမပါဘူး။ အန်လို့ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်တာတွေ ရှိတယ်။ အန်ဖတ်က အသက်ရှူလမ်းထဲရောက်တာ။ အန္တရာယ်ရှိတယ်။ အလိုလို တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းနဲ့ ချောင်းဆိုးတုံ့ပြန်မှုကနေ ကာကွယ်ပေးမယ်။ ဒါပေမဲ့ မေ့ဆေးပေးထားသူ၊ အရက် သောက်ထားသူတွေမှာ ဒီအစွမ်းနည်းနေတယ်။ ရေဓါတ်၊ ဆားဓါတ်နည်းခြင်း အန်တာများရင်ဖြစ်မယ်။ အက်စစ်ဓါတ်နဲ့ ကလိုရင်းတွေ နည်းလာမယ်။ Alkaline တွေများလာမယ်။ Hypochloremic metabolic alkalosis လို့ခေါ်တယ်။ Hypokalemia ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ မစားနိုင်ရာကနေ အားယုတ်လာမယ်။ Metabolic acidosis အထိ ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ အန်ဖန်များရင် အစာမြိုပြွန်စုတ်ပြဲတာဖြစ်နိုင်တယ်။ တချို့သွားကိုထိခိုက်စေမယ်။
ဦးနှောက်ထဲက Fourth ventricle နေရာမှာ Receptors အာရုံခံတွေကြောင့် အန်တာဖြစ်တယ်။ Postrema ခေါ်တယ်။ အန်တာမှာ အဆင့် ၂ ခုရှိတယ်။ အစပိုင်းမှာ ဗိုက်ကြွက်သားတွေ၊ အသက်ရှူကြွက်သားတွေက အလုပ်ပို လုပ်လာတယ်။ ကျို့ထိုးသလိုဘဲ။ Retching phase ခေါ်တယ်။ ဘာမှ အန်ထွက်မလာသေးဘူး။ Expulsive phase အဆင့်မှာ အားနဲ့ အတ်ထုတ်တာကို ဗိုက်နဲ့ ရင်ခေါင်းကြား ခြားထားတဲ့ ကြွက်သားကြီး Diaphragm ကလုပ်ပေးတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ ဗိုက်ကြွက်သားတွေလဲ တအားညှစ်တယ်။ အစာမြိုပြွန်အရင်းက အထိန်ကို လျှော့စေလို့ အစာအိမ်ထဲက ရှိသမျှ ထွက်လာတော့တယ်။
အန်တဲ့အထဲပါတာကို Vomitus (Vomit) အန်ဖတ် ခေါ်တယ်။ သွေးလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ပါတာကို Hematemesis ခေါ်တယ်။ သွေးဟောင်းနေတာပါရင် Coffee grounds ကော်ဖီညိုရောင် အန်မယ်။ Fecal vomiting အစာဟောင်းလည်း ပါနိုင်တယ်။ အူပိတ်တာနဲ့ Gastrocolic fistula တွေကနေ ဖြစ်စေမယ်။ နီရဲနေရင် အစာမြိုပြွန်ကလာတဲ့သွေး၊ အနီရင့်ရောင်နဲ့ သွေးခဲလေးတွေပါနေရင် အစာအိမ်ကနေလာတယ်။ ကော်ဖီရောင်က သွေးယိုတာသိပ်မများဘူး။ သွေးနဲ့ အစာခြေရည်ကနေ အရောင်ပြောင်းစေတာဖြစ်တယ်။ ဝါနေတာက သည်းခြေရည်ပါနေလို့။ သည်းခြေရည်များနေရင် အရောင်စိမ်းမယ်။
၁။ Digestive tract အစာခြေလမ်းအကြောင်းများ
• Gastritis အစာအိမ်ရောင်ခြင်း၊
• Gastroenteritis အစာအိမ်နဲ့အူရောင်ခြင်း၊
• Gastroesophageal reflux disease အစာအိမ် + အစာမြိုပြွန်ကနေ အထက်ဆန်းခြင်း၊
• Pyloric stenosis အစာအိမ်ကနေအောက်ဆင်းတဲ့နေရာ ကျဉ်းနေခြင်း၊ မွေစကလေးဆိုရင် အရေးပေါ်ခွဲကုသရမယ်။
• Bowel obstruction အူပိတ်နေခြင်း၊
• Overeating အစားများခြင်း၊ အန်ထွက်အောင်စားတယ်ဆိုာမျိုး၊
• Acute abdomen and/or peritonitis ရုတ်တရက် ဝမ်းတွင်းမြှေးရောင်ခြင်း၊ အရေးပေါ်ဖြစ်တယ်။
• Ileus အူအလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း၊
• Food allergies အစာ အလာဂျီဖြစ်ခြင်း၊
• Cholecystitis, Pancreatitis, Appendicitis, Hepatitis သည်းခြေအိတ်၊ သရက်ရွက်၊ အူအတက်၊ အသည်းရောင်ခြင်း၊ • Food poisoning အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊
၂။ Sensory system and brain ဦးနှောင်အာရုံခံစနစ်ချို့ယွင်းခြင်းများ
• Motion sickness ခရီးသွားမူး-အန်ရောဂါ၊
• Ménière's disease (မင်နရီးစ်) ရောဂါ၊
၃။ Causes in the brain ဦးနှောက်ထဲကရောဂါတွေ
• Concussion ဦးနှောက်ထိခိုက်ခြင်း၊
• Cerebral hemorrhage ဦးနှောက်ထဲသွေးယိုခြင်း၊
• Migraine မိုင်ဂရင်းရောဂါ
• Brain tumors ဦးနှောက်အကျိတ်၊
• Benign intracranial hypertension and hydrocephalus ဦးနှောက်ထဲဖိအားများခြင်း၊ အရည်များခြင်း၊
၄။ Hypercalcemia ကယ်လ်စီယမ်များနေခြင်း၊
• Uremia ကျောက်ကပ်မကောင်းလို့ ယူရီယာများနေခြင်း၊
• Adrenal insufficiency အဒရီနယ်လ်ဂလင်းမကောင်းခြင်း၊
• Hypoglycemia သကြားဓါတ်နည်းခြင်း၊
• Hyperglycemia သကြားဓါတ်များခြင်း၊ ဆီးချို၊
၅။ Pregnancy ကိုယ်ဝန်
• Morning sickness ကိုယ်ဝန်ရှိစလက္ခဏာ၊
• Hyperemesis ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ် အလွန်အန်ခြင်းရောဂါ၊
၆။ Drug reaction ဆေးဝါးများ
• Alcohol အရက်၊
• Opioids ဘိန်း၊
• Selective serotonin reuptake inhibitors ဆေး၊
• Chemotherapy drugs ကင်ဆာဆေးများ၊ Entheogens ဆေးများ၊
• Stomach flu အစာအိမ် တုပ်ကွေး၊
၇။ Emetics အန်ဆေးတွေ
Syrup of ipecac, Salt water, Mustard water, Copper sulfate တွေဖြစ်တယ်။
၈။ Social cues လူမှုရေးအကြောင်းခံများ
အနားကလူတယောက် အန်တာကိုမြင်တာနဲ့ ကိုယ်ပါအန်ချင်လာတတ်တယ်။ အနံ့ဆိုးရင် ပိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ မသတီတာ တွေ့ရင် အန်ချင်တယ်။ အသံမကြိုက်လွန်းတာကနေလဲ အန်ချင်တယ်။ ခေါင်းကိုက်လွန်းလို့၊ နာကျင်လွန်းလို့၊ စိတ်လှုတ်ရှားမှုလွန်ကဲလို့လဲ အန်မယ်။
၉။ Miscellanea တခြားအကြောင်းတရားများ
• Self-induced ကိုယ့်ဖါသာလက်ထိုးအန်ခြင်း၊
• Anorexia nervosa or Bulimia nervosa အစားအသောက်ရောဂါ၊
• Poisoning အဆိပ်သောက်လို့ အန်အောင်လုပ်ပေးရတာ၊
• Postoperative ခွဲစိတ်ပြီးအန်ခြင်း၊
• Anxiety စိုးရိမ်စိတ်ကဲခြင်း၊
• Depression စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊
ဘယ်လိုကုသမလဲဆိုတာ အကြောင်းခံအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ ရေဓါတ်မနည်းစေရဘူး။ ကြည်လင်တဲ့အစာရေစာတွေ သောက်ပါ။ တခါတည်း အများကြီးမသောက်ပါနဲ့။ နွားနို့ကို ၂၄-၄၈ နာရီကြာ ရှောင်ထားသင့်တယ်။ Bananas, Applesauce, Rice, Toast (BRAT diet) ခေါ်တာ စားသင့်တယ်။ ၂၄ နာရီအထိ မရပ်ရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ သွေးကြောထဲ ဆေးသွင်းရနိုင်တယ်။ ကလေးငယ်တွေက ရေ-ဆားနည်းတာကို ခံနိုင်မရှိကြဘူး။
Antiemetics အအန်ပျောက်ဆေးကို အများအားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ရှိစအန်တာနဲ့ ဆေးဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးကြောင့် အန်တာအတွက် သုံးတယ်။ Anticholinergics, Antihistamines, Dopamine antagonists, Serotonin antagonists နဲ့ Cannabinoids ဆေးအမျိုးအစားတွေမှာလဲ ဦးနှောက်ကိုသက်ရောက်တာဆင်လို့ အအန်ပျောက်စေတဲ့အစွမ်းရှိတယ်။ အအန်ပျောက်ဆေးတွေက ဆေးပြား၊ ဆေးရည်၊ ထိုးဆေးတွေရှိတယ်။ စအိုထဲကနေပေးနိုင်တဲ့ဆေးလဲရှိတယ်။
1. Promethazine (Phenergan)
2. Prochlorperazine (Compazine)
3. Droperidol (Inapsine)
4. Metoclopramide (Reglan) နဲ့
5. Ondansetron (Zofran) တွေဖြစ်ကြတယ်။
ဆေးပညာစာဖြစ်လို့ စုံအောင်ရေးပါတယ်။ တချို့မှာ စိုးရိမ်စရာမရှိပဲ ပျောက်ပါတယ်။
Nausea and Vomiting ပျို့ချင်-အန်ချင် http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/02/nausea-and-vomiting.html
Anti Emetics အအန်ပျောက်ဆေးများ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/anti-emetics.html
▼ 2018 (3129)